Cnc machining inzira inobvisa yekugadzira iyo chidimbu chezvinhu zvakasvibirira chinotemwa muchikamu chekupedzisira chinodiwa uchishandisa komputa yekuverenga kudzora. Cnc machine yakazova indasitiri mwero mukupera kwema1960 uye yakaramba iri nzira inosarudzika yemuchina nanhasi. Cnc machine ari manuf ...
Carbon Simbi Kukanda
Carbon simbi chinhu chakakurumbira chemhando dzakasiyana siyana dzekushandisa. Iyo isingadhuri, inowanikwa nyore nyore mumakero mazhinji, uye inogona kurapwa kurapwa kupisa simba rayo, ductility, uye machinability. Dongying Shengyu Metal Chigadzirwa Chigadzirwa Ltd., inopa yakakwira kabhoni simbi uye yakaderera chiwanikwa kukanda ...
Iyo Yakanakisa Simbi Simbi Investment Inokanda Foundry muChina
Dongying Shengyu Metal Chigadzirwa. ..
Foundry Mould Hunhu Zvinoreva Hunhu Castings
Kune ma foundries, iyo yepamusoro yekukanda muforoma zvinoreva, zvinoreva yakaderera mutengo, yakakwira kuburitsa uye purofiti. Parizvino, yechipfuwo muforoma indasitiri yakagadzira nekukurumidza, chete aruminiyamu giravhiti kufa kukanda chirimwa chichava chidiki pane mazana, uye nekuvandudzwa kwemotokari indasitiri uye ...
Unoziva Iwe Chii Chakajairika Dhizaini yeiyo Kugadziridza Zvikamu anoshandiswa kune Precision Hardware?
Kugadzira Hardware ibasa rakapfava, kugadzira Hardware kunogona zvakare kunzi kushandiswa kwesimbi, uko pamusoro pekugadzirisa zvikamu kunogona zvakare kugoverwa mumarudzi mazhinji, simbi simbi yekugadzirisa, simbi yekupenda kugadzira, electroplating, pamusoro polishing kugadzira, simbi. ..
Global Investment Inokanda Musika (2020-2025) - NeNzira Yekugadzira, Chinyorwa, Kunyorera uye Nharaunda
Kubva 2014 kuna 2019, ari remubatanidzwa pagore kukura zvazvingava yose inivhesitimendi Kudzingwa pamusika anenge 5%. Tichitarisa kumberi, vaparidzi vanotarisira kuti musika wepasirese wekutsvaga mari kuti urambe uchikura zvine mwero mumakore mashanu anotevera. Investment Kudzingwa, kana dewaxing, chiitiko cheindasitiri icho chino ...